Halganka inaad cunto ku hesho miiskaaga? | Faahfaahinta Wararka Degmada
Halganka inaad cunto ku hesho miiskaaga?
Haddii aad dhibaato ku qabtid nolol maalmeedkaaga iyo inaad miiskaaga ku hayso cuntada, waxaa jira caawimaad la heli karo. Gobolku wuxuu u fidinayaa kaalmada cuntada ku meel gaarka ah qoysaska reer Minnesota ee loo yaqaan 'Pandemic Electronic Transfer Transfer,' ama 'P-EBT'. P-EBT waxay siisaa waxtarro aad ugu eg dheefaha Barnaamijka Taageerada Nafaqada Dheeraadka ah (SNAP), kaas oo u oggolaanaya qoysaska inay ka iibsadaan cuntada SNAP ee u qalma tafaariiqleyda maxalliga ah.
Waa inaad codsataa kahor Febraayo 26, 2021 si aad uhesho waxtarrada sannad dugsiyeedka intiisa kale. Waxaad ka dalban kartaa Faa'iidooyinka P-EBT adoo ku buuxinaya arjiga bilaashka ah / qiimaha la dhimay khadka tooska ah ee schoolcafe.com/StillwaterAreaISD
Haddii aad horay u qaadanaysay dheefaha SNAP ama Barnaamijka Maalgelinta Qoyska ee Minnesota (MFIP), ama haddii aad horay u buuxisay arjiga 2020-2021, uma baahnid inaad wax qabato - si otomaatig ah ayaad u heli doontaa gunnooyinkaas.
Waa inaad ku haysataa cinwaanka cinwaanka boostada ee hadda jira faylka dugsiga si aad ugu hesho kaarka P-EBT boostada. Fadlan kala xiriir Adam Mazzara at mazzaraa@stillwaterschools.org wixii cusboonaysiin ah cinwaankaaga.
Fadlan la soco, inta ay tahay inaad buuxiso arjiga cuntada bilaashka ah / qiimaha jaban ee laguu tixgelinayo waxtarka P-EBT barnaamijka waxtarka cunnada ee gobolku gebi ahaanba wuu ka duwan yahay barnaamijkeena cunnada iskuulka. Cunnooyinka iskuulku waxay sii wadi doonaan inay bilaash u ahaadaan ardayda sannadkan.